श्रीमती परपुरुषसँग सल्केको कसरी थाहा पाउने ? यी हुन् सजिलो उपाय र तरिका - Darpanpost
» रोचक अंक: 13279
श्रीमती परपुरुषसँग सल्केको कसरी थाहा पाउने ? यी हुन् सजिलो उपाय र तरिका
मोबाइल : फोनमा गर्ने कुराकानीको साविकको शैलीमा परिवर्तनदेखि तुलनात्मक रुपमा समय धेरै दिन थालिए शंका गर्न सकिन्छ । फोन आउँदा श्रीमतीको हाउभाउमा परिवर्तन आए, बारम्बर फोन आए, स्वरको परिवर्तन, मेसेज गर्ने प्रवृत्तिहरु श्रीमतीमाथि शंका गर्न सकिन्छ ।
केटी साथीहरुसँग घुलमिल : श्रीमतीका केटी साथी कति छन् ? केटी साथीसँग पहिलेको भन्दा बढी समय बिताउँछिन कि बिताउन्नन ? कतै केटी साथीलाई भेटन जाने भनेर अरु कसैलाई भेट्न त गएकी छैनन् ? केही समयअघिसम्म बेलुकी अरुसँग समय नबिताउने तपाईंको श्रीमती एकाएक धेरैजसो समय बाहिर नै बिताउने गर्न थाल्छिन् भने तपाईंमाथि धोका भइरहेको हुनसक्छ । तपाईंकी श्रीमती केटी साथीहरुसँग नभई अरु कुनै मानिससँग समय बिताइरहेको हुनसक्छ ।
दिउँसो नुहाउने : विगतमा दिउँसो ननुहाउने श्रीमती घर फर्कने बेला नुहाएर आएमा शंका गर्न सकिन्छ । तर, के कारणले हो त्यो बुझ्नु आवश्यक छ । श्रीमतीको शरीरबाट यदी पुरुष गन्ध आएमा शंका गर्न मिल्ने आधार हुन सक्छ ।
व्यवहारमा फकरकपन : औषत रुपमा अर्थात तुलनात्मक रुपमा श्रीमतीको व्यवहार फरक देखिएमा श्रीमती परपुरुषसँग सल्केको हुन सक्छ । तपाईँसँग आँखा जुधार बोल्ने श्रीमती शीर झुकाएर कुरा गर्न थालेमा, झर्कने रिसाउने गरेमा आशंकाको मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ ।
यौन विचलन : तुलनात्मक रुपमा एक्कासी श्रीमतीमा आउने यौन चाहना, तपाईंलाई खुुसी पार्न निस्क्रिय रुपमा यौन कार्यमा सहभागी भएमा श्रीमतीमाथि शंका गर्ने आधार हुन सक्छ । एजेन्सी